बालोन डी‘ओरको घोषणा आज हुँदै, कसले मार्ला बाजी ? - Khabar Break | Khabar Break
बालोन डी‘ओरको घोषणा आज हुँदै, कसले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी, १६ मंसिर । फुटबलको सर्वाधिक प्रतिष्ठित अवार्ड बालोन डी‘ओरको घोषणा आज हुँदैछ । फ्रान्सको पेरिसस्थित थिएटर डी चाटलेटमा एक विषेश समारोहबीच सन् २०१९ को बालोन डी‘ओरको घोषणा हुन लागेको हो । यो ६४औं बालोन डी‘ओर हो । फुटबलकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित अवार्ड बालोन डी‘ओरका पहिलो विजेता भो सर स्टान्ली माथेस हुन् । उनले सन् १९५६ मा यो अवार्ड हात पारेका थिए । फ्रान्स फुटबलले प्रदान गर्ने यस अवार्डको सर्वाधिक धेरै पटक जित्ने खेलाडी अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ।
यी दुवै खेलाडीले समान पाँच–पाँच पटक बालोन डी‘ओरको अवार्ड जितेका छन् । रोनाल्डो र मेस्सीले सन् २००८ देखि लगातार १० वर्ष यो अवार्ड जित्दै आएका थिए । तर, सन् २०१८ अर्थात् अघिल्लो वर्ष क्रोएशियाका लुका मोड्रिकले जितेका थिए ।
रोनाल्डोले सन् २००८, २०१३, २०१४, २०१६, २०१७ गरी पाँच पटक जितेका छन् भने मेस्सीले २००९, २०१०, २०११, २०१२ र २०१५ मा जितेका थिए । यस्ते धेरै बालोन डी‘ओर जित्नेमध्ये तेस्रो स्थानमा फ्रान्सका मिचेल प्लाटिनी, डच फुटलरद्वय जोहान क्रुफ र मार्को भान बास्टेन रहेका छन् । यी तीन जनाले समान ३–३ पटक बालोन डी‘ओरको अवार्ड जितेका छन् ।
अब, यसपटकका लागि नेदरल्याण्डका स्टार खेलाडी भर्जिल भान डाइक, अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी र पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई मुख्य दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । भान डाइक सन् २०१८ को च्याम्पियन्स लिगका विजेता हुन् । उनले यसै अगस्टमा ‘यूइएफए प्लेयर अफ दि इयर’ को अवार्ड हात पारेका थिए ।
यस्तै रोनाल्डोले युभेन्टसलाई सिरी ‘ए’ र सुपर कोपा इटालियाको उपाधि दिलाएका छन् । यसका अलाबा रोनाल्डोले पोर्चुगललाई यूइएफए नेशन्स लिगको उपाधि पनि जिताएका छन् । मेस्सी अघिल्लो सिजनको ला लिगा विजेता हुन् । यसका साथै अघिल्लो सिजनको च्याम्पियन्स लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता मेस्सीले अघिल्लो महिना मात्र फिफाको ‘द बेस्ट मेन्स प्लेयर’को अवार्ड हात पारेका थिए ।
रोनाल्डो र मेस्सी यो पटक पनि बालोन डी‘ओर जित्दै कीर्तिमानी रच्ने दाउमा छन् । अहिले सर्वाधिक बालोन डी‘ओर विजेताका रूपमा दुवै खेलाडी छन् । तर, अब यी दुईमध्ये एक जनाले जितेमा सर्वाधिक धेरै बालोन डी‘ओर जित्ने खेलाडी बन्दै विश्व कीर्तिमान रच्नेछन् ।
मेस्सी, रोनाल्डो र भान डाइकबाहेक अन्य २७ जना पनि यस अवार्डको दौडमा छन् । यस अवार्डका लागि ३० जना खेलाडी मनोनित छन् । अक्टोबर २१ मा ३० जनाको सूची सार्वजनिक भएको थियो । जसमा, युरोपियन च्याम्पियन्स लिग विजेता लिभरपुलका ७ जना खेलाडी परेका छन् । भान डाइकबाहेक लिभरपुलका मोहमद सालाह, रोबर्टो फिर्मिनो, एलिसन बेकर, ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर–आर्नोल्ड, साडियो माने र जर्जिनियो विज्नाडम यो वर्षको बालोन डी‘ओरको मनोनयनमा छन् ।